Uhlu lwe-imeyili lwase-USA | Ikheli le-imeyili Yabathengi | Idathabhegi Yokuposa Yamuva
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwase-USA
Okokuqala uhlu lwama-imeyili lwase-USA libuyekeziwe futhi nohlu lwamakheli olusanda kufakwa. Idathabheyisi Yokuposa Yakamuva ingenye yenkampani ebonelela kakhulu ekuhlinzekeni uhlu lokumaketha ku-inthanethi. Idathabhegi Yokuposa Yakamuva izokusiza ukukunikeza uhlu lwe-imeyili olucishe lukulungele. Sinezigidi zohlu lwe-imeyili lwase-USA olufaneleke kakhulu futhi olusha muva nje. Ngakho-ke ungenza inzuzo enhle emkhakheni wokumaketha ngeposi online uma uthola uhlu lwamakheli. Singakuqinisekisa ukuthi ungathola insizakalo enhle kakhulu kusuka kuDathabheyisi yamakheli wakamuva ngaphandle kokwenza inkinga.
Idathabheyili Yokugcina Yamaphepha eye yaqokwa njengenye yezinkampani ezithembisa kakhulu ukuthengisa nge-inthanethi zaleli zwe manje - manje ekuthengisela abathengi (i-B2C), indawo yokuhlala neyebhizinisi (i-B2B) uhlu lwe-database oluvela e-USA. Idathabheki yeMeyili yakamuva inedatha ye-imeyili yebhizinisi lase-USA kanye nedatha ye-imeyili yabathengi yase-USA.
IKheli le-imeyili lase-USA
Uhlu lwe-imeyili lwase-USA luzokusiza ukuthi ufinyelele kosomabhizinisi base-USA. Iphinde ikongele isikhathi nemali. Uma ufuna ukwakha uhlu lwe-imeyili lwase-USA kukuthatha isikhathi esiningi ngesizathu sokuthi songa isikhathi sakho nemali. Sinohlu lwama-imeyili e-USA Business olunemininingwane eyi-90%. Enye indlela ongazakhela ngayo uhlu lwakho lwe-imeyili ngoba sizokunikeza ithimba lokwakha uhlu lwama-imeyili. Uvele usitshele ibhizinisi lakho elihlosiwe. Cishe sinemininingwane engaphezu kwezigidi eziyi-100 ezivela e-United State.
Idathabheki Yokuposa Yamahhala futhi ikusiza ukuba wakhe umugqa wakho oqondile wokuthengisa ovela e-USA. Ithimba lethu lizokunikeza ngokuthengisa okuholela ngqo kwebhizinisi lakho. Vele usitshele ngezigaba zamaklayenti akho nemikhiqizo yakho lapho ithimba lethu lizokwakha umkhondo wakho wokuthengisa oqondisiwe. Namuhla imikhankaso yokuthengisa imeyili iyindlela enhle yokuqhakambisa ibhizinisi lakho online kepha uma ufuna ukudala umkhankaso wemeyili ekuqaleni uzodinga ukuthola uhlu lwamakheli esizokusiza ukuthi unikeze uhlu lwakho lokuposa.
Database Ye-imeyili Yebhizinisi Lase-USA
Ikheli le-imeyili le-USA B2B
Okokuqala imininingo egciniwe ye-imeyili yebhizinisi lase-USA isanda kuvuselela nayo yonke imininingwane yebhizinisi lendawo lase-United States. Uzothola lonke ibhizinisi nohlu lwamakheli lwamakheli kusuka lapha. Futhi, sinedatha yebhizinisi ngesimo. Cishe sinayo yonke imininingwane yezwe evela e-USA. Uzothola idatha yakho ngomzuzwana. Ngakho-ke ungasebenzisa lolu hlu lwe-imeyili kunoma yikuphi ukukhushulwa kwenkampani yakho.
Cishe sinamarekhodi we-30 million we-b2b asuka e-USA. Ngakho-ke uma uthenga lolu hlu uzothola i-imeyili eyisigidi se-4 i-imeyili futhi negama lebhizinisi le-30 lesigidi futhi likhuluma ngewebhusayithi futhi nenombolo yefekisi futhi negama lokuxhumana. Ngakho-ke qala imikhankaso yakho e-USA. Phezu kwayo yonke imininingwane ye-imeyili yebhizinisi le-imeyili yebhizinisi lase-USA.
Thenga Ukuvuselelwa kwe-imeyili ye-imeyili yase-USA B2B yakamuva
Inani lamarekhodi: 30 Million
* Igama Lokuqala * Igama Lokuxhumana * Igama lebhizinisi * ikheli * Idolobha * I-Zip yekhodi * Yombuso
Ukulethwa: Landa ngokushesha. 30
Uhlu Lwama-imeyili Abathengi base-USA
Ikheli le-imeyili lase-USA B2C
Okubaluleke kakhulu,. Uhlu lwe-imeyili lwabathengi base-USA luzokunikeza i-ROI enhle (buyisela kutshalomali). Idathabhegi Yokuposa Yakamuva inikeze wena kuphela abantu base-USA ukuxhumana nekheli le-imeyili lomuntu siqu. Uma uthanda ukuthola ikheli le-imeyili le-USA b2c njenge-yahoo, i-gmail, i-hotmail, i-outlook, i-aol njlllikheli le-imeyili lamahhala ungabona imininingwane yethu yohlu lwe-imeyili yabathengi base-USA ngoba, Le database ihlanganisa kuphela i-USA B2C noma ikheli le-imeyili lomuntu siqu.
Uhlu lwe-imeyili lwabathengi base-USA lubandakanya wonke umuntu, ikheli lomuntu siqu. Idatha yethu yomuntu siqu yase-USA nayo ingenile futhi iqinisekisiwe, ivuselelwa ngo-2019. Idatha yabathengi base-USA ifake wonke amakheli e-IP azokusiza ekumelaneni nokukhononda kwe-ISP.
Ngakho-ke uma ufuna ukumaketha ibhizinisi lakho e-USA ungasebenzisa lolu hlu lwe-imeyili ngoba kuzokongela isikhathi nemali yakho. Futhi, ungakha uhlu lwakho lwabathengi kusuka kithi. Phezu kwayo yonke imininingwane yedatha ye-imeyili yabathengi yase-USA.
Thenga Ukuvuselelwa kwe-imeyili ye-imeyili yakamuva ye-USA B2C
Inani lamarekhodi: 40 Million
* Igama Lokuqala * Igama Lokuxhumana * Ubudala * ikheli * Ikheli le-imeyili
* IP ikheli * Inombolo yocingo
I-imeyili Uhlu lwe-imeyili Umbuzo neempendulo
Uhlu lwe-imeyili lwe-Bahrain
Uhlu lwe-imeyili lwaseJapan
Uhla imeyili imeyili
Uhlu lwe-imeyili lwaseHong Kong
Uhlu lwe-imeyili ye-Indonesia
Uhlu lwe-imeyili ePhilippines
Iran Uhlu imeyili
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseFinland
Uhlu lwezinombolo zocingo ze-UAE
I-database yenombolo yeselula yase-Australia